Bonke abantwana banombono wabo wehlabathi elibajikelezile. Baqonda kwaye baziva banakekelwa ngabazali babo, bacinge ngabanye abantu, kodwa ungazami ukudlulisela iimvakalelo zabo. I-Chadi ithetha abazali ngamabali amaninzi, ngokuqhelekileyo baxela kuphela iimvakalelo ezintle, ngokukhawuleza ukukhawuleza ixesha elidlulileyo. Qaphela ukuba isimo sengqondo somntwana sinokuba ngabazali bakhe kuphela, kodwa uyakhumbula ngeengqondo kunye nokusebenza kwayo.
Ingqondo yezingane kunye nemidwebo inxulumene ngokusondeleyo, eye yaboniswa yiingcali emhlabeni jikelele. Imifanekiso yepeyinti okanye ukudala "i-masterpieces" entsha, umntwana uhlala engaxeleli ngaye ngokwakhe. Amanani athetha ngezinto ezininzi, akwazi ukubonakalisa ngokupheleleyo ihlabathi langaphakathi labantwana. Ezinye zazo zicacile, ngoko, kufuneka ziqwalaselwe ngolwazi olongezelelweyo ngabazali.
Amanani ukusuka kwinqanaba leengcali zeengqondo.
Okokuqala, icebo lombala. Umbala ubalulekile, unokushukumisa isimo sengqondo kunye nesimo sengqondo kwihlabathi. I-psychology yabantwana kwimidwebo ithathwa kuqala ngocwangciso lombala. Ngokomzekelo, ukuba umntwana udla ngokusebenzisa ipensele ebomvu, oku kubonisa umdla wakhe. Lo mzobo kufuneka uhlawulwe ngokukodwa, unokuchaza ukukhathazeka okungadingekanga kwintsapho okanye kwindawo esondeleyo. Umbala obomvu awuqhelekanga, kodwa umnyama awunqabile. Abantwana bakhe akufanele basetyenziswe ngamanani amaninzi, kuba oku kukubonakalisa umhlaba ongaphakathi ongalunganga. Ukudweba kwipensile emnyama kudibene nomsindo nokunganeliseki. Abazali banokuhlala lula xa umntwana ekhupha imibala eyahlukileyo, ngaphandle kokusebenzisa enye yazo ngokubanzi.
Okwesibini, umfanekiso weentsapho. Ingqondo yezingane kwimidwebo ingabonisa isimo sengqondo sabantwana kubazali. Iingcali zibuza umntwana ukuba athathe umndeni wakhe, aze abuke umfanekiso. Ngamanye amaxesha abantwana bayayifumana yonke intsapho ngokufanelekileyo, kodwa kaninzi ukukhula kunye nobudlelwane babazali bubambano obubonakalayo. Umzekelo, umntwana umi phakathi kwabantu abadala abadala abaphethe iingalo. Umfanekiso omkhulu uchaza ubuhlobo obusondeleyo kwintsapho. Umntwana wabo uziva enqabileyo kwaye uyichaza kwisiqwenga samaphepha. I-Psychology ibonisa ukuchaneka kokuchazwa kwalo mfanekiso. Unokufumana kwakhona imifanekiso apho omnye wabazali ephethe umntwana ngesandla, kwaye enye ihamba eceleni. Kule nto ayikho into eyoyikisayo, oku kubonisa ukuba ukusondelana komntwana kumama okanye uyise. Kodwa, ukuba umntwana wakhupha umzali omnye, lixesha lokutshintsha ubuhlobo kwintsapho. Emva koko, oku kuthetha ukungabikho kwenxalenye yentsapho ekuqondeni komntwana. Ngokuqhelekileyo oku kwenzekayo xa abantwana bengaboniswanga kunye noyise okanye umama.
Okwesithathu, imigca elula. Imilinganiselo yabantwana inokuxelela iingqondo zeengqondo malunga nento yonke. Nangona umgca okhishwe ngumntwana ulungele ukubonelela ngolwazi malunga nehlabathi langaphakathi. Iimpawu ezinqabileyo, ezinokuthula zibonisa ukwaneliseka nobudlelwane kwintsapho. Ikhefu lokukhahlela kunye nokujika - ukungalingani, ukuxhalaba, ukubusa kwihlabathi elijikeleze umntwana. Iingqungquthela - ukuxhomekeka okuncinci ngokwalo, okunokuchaphazela kakubi ukufunda kunye nolwalamano nabanye abantwana. Ekugqibeleni, izikwere okanye ezinye izivalo ezivaliweyo, zincinci zithetha ubunzima bezonxibelelwano, ezixhomekeke ekuvalweni kwihlabathi elikufutshane.
Abazali bafanele bajonge ngokukhawuleza "ubuchule" babo babantwana. Zityhila zonke ubudlelwane kunye nehlabathi langaphakathi. Ukuba ufumana impazamo ekukhuliseni ngexesha, ungayilungisa. Ngaphandle koko, izinto ezingenakulinganiswa zingenzeka, umntwana uya kuba ngumntu ongenanto kwaye akayi kukwazi ukuhlala kuluntu. Imilinganiselo ibalulekile, kwaye kufuneka ihlawule ingqalelo ukuba ungaphuthelwa umgca wemfundo.
Indlela yokuxhasa umntwana emva komtshato womzali
Inkumbulo yabantwana kunye nophuhliso lwayo
Fundisa umntwana ukulawula iimvakalelo ezimbi
I-canape yamaqanda ekudleni kwasekuseni
Sityalo saseTillandsia ngaphakathi
Ukungenzi lutho: izilwanyana zabantu
Unyango lwamafuba e-anti virus
Ngaba ukunyaniseka kuya kunceda ukususa i-cellulite?
Umzimba omuhle ekhaya
Ikopi yasePapa: U-Olga Kazachenko wabonisa kuqala ubuso bakhe bonyana
Ikhwele, indlela yokujongana nayo